Kolontsaina: mifototra fa tsy mifatotra | NewsMada
Kolontsaina: mifototra fa tsy mifatotra
Ny vanim-potoana tahaka izao (faran’ny taona) matetika ahatazanana sy ahatsapana fa maro ny talenta tokony sy mila havoaka ho hitan’ny olona. Mahavariana anefa fa saika rakotry ny famerenana ny sanganasan’olon-kafa hatrany ireny talenta nimpirimpirina tany ho any ireny. Vitsy ny mamorona !
Ireo sasantsasany manam-piniavana mamorona indray, tsy sahy maneho ny tena kolontsaina malagasy fa tsy maintsy mampifamatotra izany amina kolontsaina hafa avy any ivelan’i Madagasikara. Tena misongadina amin’io, ny hira. Tsy maro loatra intsony ny mpamoron-kira maka fototra na mifototra amin’ny hira mampiavaka ny Malagasy.
… Ny mifatotra mbola azo vahana na mety hivaha ho azy ihany koa, fa ny mifototra na manana fototra malagasy, efa zary ra mikoriana ao anaty ka na aiza na aiza toerana misy ny tena (eto an-tanindrazana na any ivelany), na inona na inona tranga mety hiseho, ahatsapana hatrany fa aingam-panahy malagasy ny namoahana an’io. Iny ilay tsy lefin’ny vanim-potoana !